Sina SEBIC Tanora mahery herinaratra tanàna 36v 48v bateria lithium bateria bisikileta ebike orinasa mpamokatra sy mpanamboatra Funncycle
Laharana maodely BEF-MG28RF
Fork fampiatoana 28 * 2.0 ″, firaka + firaka
-maso Wave toradroa 36V 15A
[Frame sy fork]:Famolavolana miafina vita amin'ny alimika alimina. Ny fanamafisam-peo dia nanamafy ny fork, lamaody kokoa, maharitra ary mateza. Ny jiro sy ny anjomara LCD dia mamela anao handeha soa aman-tsara kokoa amin'ny alina.
[Rafitra fanidiana Premium]: Ny freins front sy aoriana mekanika, ho an'ny hery miato amin'ny toetr'andro rehetra. Fitaovana haingo haingam-pandeha Shimano 7 haingam-pandeha, fiovan'ny halaviran-dàlana bebe kokoa ary ny fanamorana ny tany.
[Fitaovana]:Ny endrin'ny bisikiletan'ny tanànantsika elektrika dia vita amin'ny Alloy Aluminium, maivana, matanjaka ary natao haharitra, manamora ny fivezivezena. Ny sisin'ny alimika vita amin'ny alim-baravarana alimika dia ho an'ny mateza bebe kokoa ary koa mitaingina haingana kokoa tsy dia misintona. Ny fork fampiatoana hery mahery vaika dia mety hampionona ny mpitaingina anao amin'ny dingana manaraka.
[Tandremo]:Aza mikasika ny bateria raha tsy misy lamba na fonon-tànana ary alao antoka fa tsy misy asidra manohina ny masonao; Tazomy mba tsy ho azon'ny ankizy ny batterie.
[Antoka]:Vidio am-pitokisana ity entana ity. Raha misy olana amin'izany dia aza misalasala mifandray aminay, ary hamaly azy izahay ary hamaha azy ao anatin'ny 24 ora. Ny fahafaham-ponao no laharam-pahamehanay.
Teo aloha: SEBIC 26 mirefy volom-boaloboka lanezy vita amin'ny tora-pasika any an-tendrombohitra
Manaraka: Moto herinaratra SEBIC 28 mirefy 250w 350w 36v 48v bisikileta